BBC Somali - Cayaaraha - Cayaaraha maanta dhacaya ee tartanka England Premier League
1 Janaayo, 2011, 12:05 GMT 15:05 SGA
Cayaaraha maanta dhacaya ee tartanka England Premier League
Cayaaro xiiso leh, ayaa maanta dhacay tartanka England Premiership.
Cayaarta ugu horaysa waxay dhexmaraysaa kooxaha West Brom iyo Man United, iyadoo bilaabanysa saacadda africada bari marka ay tahay 3:45 galabnimo, ama sagaal saac iyo shan iyo afartan daqiiqo.
Cayaaraha kale Liverpool waxay la cayaaraysaa Bolton. Cayaartan si toos ah ayay BBC Somali ugu soo tabinaysaa dhagaystayaasha.
Manchester City waxay la cayaaraysaa Blackpool, Stoke ayaa la kulmaysa Everton, Sunderland waxay is arkayaan Balckburn, Tottenham ayaa martigalinaysa Fulham, West Ham-na waxaa marti u ah kooxda Wolverhampton.
Dhamaan cayaaraha waxay dhacayaan saacadda Africada bari marka ay tahay 6-da maqribnimo.
Sideedda iyo barka fiidnimana waxaa cayaar kulul la filayaa in ay dhexmarto kooxaha Birmingham iyo Arsenal.
Natiijooyinka horyaalka ee toddobaadkan Man U iyo Barcelona o laga adkaaday
Natiijooyinka kulammada horyaalka Wararka hore
Ciidanka Somaliland oo ka baxay Taleex
Iska hor imaadyo ka dhacay Qudus
Ukraine: Ruushka ayaa "argegixiso" soo diray